Global Voices teny Malagasy » Afa-miaritra tsy fisian-drano mandritra ny herinandro maro ny faritra mahantra indrindra ao Jordania, ny manankarena kosa mahazo famatsian-drano 24/7 · Global Voices teny Malagasy » Print
Afa-miaritra tsy fisian-drano mandritra ny herinandro maro ny faritra mahantra indrindra ao Jordania, ny manankarena kosa mahazo famatsian-drano 24/7
Voadika ny 22 Avrily 2018 14:03 GMT 1	 · Mpanoratra Maram Alkayed Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Jordania, Fitantanam-pitondrana, Mediam-bahoaka, Tontolo_iainana
Wadi Rum, Jordania. Sary: TreksJo. Nahazoana alalana
Jordania no firenena faharoa mahantra rano indrindra eto an-tany.  Ikambanana amin'i Israely ny iray amin'ny mpamatsy rano azy miisa roa, ny Reniranon'i Jordana, ary ikambanana amin'i Syria  ny iray hafa, Reniranon'i Yarmouk  – izay mahatonga ny rano ho an'i Jordania ho ampahany kely sisa .
Raha ny momba ireo tobin-drano 12 hita manerana ny firenena, ahiahy ny faharetany satria ampiasaina amin'ny fandehany faran'izay ambony izany, ary ny hafa kosa ampiasaina tafahoatra, mandrahona ny fampiasana azy amin'ny ho avy .
Nahasempotra ireo olona 1,4 tapitrisa fanampiny  monina any Jordania miankina amin'ny loharanony voafetra noho ny ady Syriana ny toe-draharaha.
Raha mijery ny hoavy, dia ny fiovaovan'ny toetr'andro ihany no tena mandrahona hanimba izany (tsy fisian-drano). Naminavina ireo mpahay siansa avy ao amin'ny Oniversiten'i Stanford fa amin'ny faran'ny taonjato, dia mety hafana 4°C kokoa, sady tsy dia misy orana . Noho izany dia atahorana ny mety ho tsy fisian-drano tanteraka, satria mety ho avo roa heny ny haintany sy ny faharetany eo anelanelan'ny taona 2071 sy 2100.
Na dia tsy azo lavina aza ny tolona, mahatsapa tsy fitoviana ny olom-pirenena miisa 9.903.877  any Jordania. Matetika mifamatotra amin'ny sata ara-tsosialin'ny faritra ny tsy fahombiazan'ny governemanta hanome rano ho an'ny toerana sasany.
Sara Bader, mponina teo aloha tao an-tanànan'i Al-Yasmine itatr'i Amman (tanàna iray be mponina sy saranga ambany) niresaka tamin'ny Global Voices momba ny zava-niainany rehefa nifindra tany Abdoun izy (faritra iray heverina fa ho an'ny saranga ambony):
Mahazo rano indroa isan-kerinandro izahay [ao Al-Yasmine], indraindray mila tsy ho ampy anay herinandro rehefa lohataona, manokana fotoana hanaovana fanasan-damba sy zavatra hafa handaniana rano amin'ny andro hahatongavan'ny rano eny amin'ny paompy. Mailo foana foana izahay rehefa mampiasa rano. Ankehitriny [ao Abdoun], misy rano foana isan'andro eny amin'ny paompy, ary tsy miraharaha izay andro anatin'ny herinandro hanaovany fanasan-damba ny reniko.
Mety tsy rariny ny hoe misy ny faritra manana rano amin'ny paompy 24/7 raha mahazo rano indroa isan-kerinandro kosa ny hafa, saingy raha ny marina, tombontsoa nofinofisin'ny Jordaniana maro eny amin'ny toerana ny fahazoana rano amin'ny paompy indroa isan-kerinandro.
Any amin'ireo faritra mahantra any Amman, any amin'ny faritany, ary indrindra indrindra eny amin'ny tanàna kely, mandeha isaky ny 20 andro ny rano madio, ary indraindray tsy misy mihitsy.
Tamin'ny taratasy nalefa ho an'ny governemanta  izay mitaraina mikasika ny olan'ny rano, olom-pirenena iray monina ao amin'ny faritanin'i Jerash nilaza hoe:
Mampahafantatra ny tolon'ireo olona an-jatony aminao aho – olona izay tsy nanan-drano madio (amin'ny paompy) mandritra ny 30 na 20 na 19 andro.
Manana porofo aho fa tsy misy rano mandritra ny herintaona ny fantson-drano sasany satria tsy manisy rano eny amin'izany toerana izany ny lapan'ny tanàna, na dia indray mandeha isam-bolana aza.
Mampiseho ny fanehoan-kevitra ao amin'ny taratasy avy amin'ny namany Jordaniana fa miatrika izany olana izany koa ny hafa. Maro ireo nanoro hevitra azy mba hifindra trano “manakaiky ny solontenan'ny governemanta” na “any amin'ny faritra tsara kokoa” mba hahafahany mahazo rano tsara, satria “tsy tsikaritra” eny amin'ny faritry ny “sangany” ny famatsian-drano.
Ny olana goavana any amin'ny faritany dia matetika marobe ny ankohonan'ireo fianakaviana eny, ary tantsaha ny ankamaroan'ireo mponina ireo izay mila mafy rano ho an'ny famboleny ihany koa.
Tsy lazaina intsony ny faktioran-drano omen'ny fitondrana ho an'ny vahoaka na mahazo rano izy ireo na tsia. Raha tsy mahazo rano izy ireo ohatra, dia tsy maintsy mividy rano omen'ny mpamatsy rano tsy miankina amin'ny fanjakana (na “siniben–drano”, araka ny ahafantarana azy). Noho izany, tsy maintsy mandoa vola roa izy ireo: ny iray avy amin'ny governemanta, ary ny iray avy amin'izay olona karamainao hameno ny sinibe.
4 dinara Jordaniana (6 dolara amerikana isaky ny metatra) ny vidiny apetraky ny governemanta amin'ireo siniben-drano ireo, efa vola be izay tsy zakan'ny olona maro, kanefa manararaotra ny olom-pirenena ireo tolotra ireo amin'ny fotoana ilany azy, mampandòa 5 dinara.
Inona no antony mahatonga ny tsy firaharahina miharihary ataon'ny governemanta mikasika ny famatsian-drano eny amin'ireo faritany ireo? Nisy mpiasa iray ao amin'ny Minisiteran'ny rano sy ny fitarihan-drano niresaka tamin'ny GV ary nangataka tsy hotononina ny anarany:
Samihafa amin'ny fihevitry ny ankamaroan'ny olona ny zava-misy: tsy ny ministera no diso amin'ny fandaharam-potoana, fa manana fotodrafitrasa sy fantsona efa malemy ireo faritra mahantra indrindra ireo ka tsy afaka vatsiana rano tsy tapaka satria efa manary ny 2/3 ny rano ireo fitaovana ireo. Izany no mahatonga ireo toerana ireo tsy manana famatsian-drano tsy tapaka, satria tsy afaka manefa izany rano be izany isan'andro ny minisitera, noho izany, isan-kerinandro na isaky ny tapa-bolana no vatsiana ny rano, ary tsy mahazo ny ankamaroany noho ny fantsona manary rano.
Rehefa nanontaniana ny antony mahatonga ny minisitera tsy mamaha ny rano very eny amin'ny fantsona na manolo azy rehetra, naneho hevitra fotsiny izy fa tsy afaka manome vaindohan-draharaha amin'izany ny tetibola amin'izao fotoana izao.
Na izany aza, mampanantena fitsinjarana rano ara-drariny  ny governemanta amin'ity taona ity ary azo antoka  ny famatsian-drano eny amin'ny faritany mandritra ny fahavaratra. Antenaina fa hitàna izany fampanantenana izany izy – na izany na tsy izany, zon'ny olombelona  ny rano.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/04/22/118212/
 firenena faharoa mahantra rano indrindra eto an-tany.: http://www.jordantimes.com/news/local/jordan-world%E2%80%99s-second-water-poorest-country
 Reniranon'i Jordana, : https://en.wikipedia.org/wiki/Jordan_River
 Reniranon'i Yarmouk: https://en.wikipedia.org/wiki/Yarmouk_River
 ampahany kely sisa: http://www.gerasanews.com/print/90410
 mandrahona ny fampiasana azy amin'ny ho avy: http://kenanahnews.com/?p=27344
 olona 1,4 tapitrisa fanampiny: https://reliefweb.int/report/jordan/climate-change-refugees-worsen-jordans-water-woes-scientists
 4°C kokoa, sady tsy dia misy orana: https://www.economist.com/news/middle-east-and-africa/21731844-thirsty-kingdom-can-ill-afford-fall-out-its-neighbour-jordans-water
 taratasy nalefa ho an'ny governemanta: http://www.ammonnews.net/article/66321
 fitsinjarana rano ara-drariny: https://www.khaberni.com/news/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A8%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-230774
 azo antoka: http://www.alghad.com/articles/1578432-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D8%B1%D8%B4-%D9%88%D8%B9%D8%AC%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%AA%D8%AC%D8%B9%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85-%D8%A2%D9%85%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7
 zon'ny olombelona: http://www.un.org/waterforlifedecade/human_right_to_water.shtml